Software GIS Simple: GIS by $ 25 macmiilka iyo Web server for $ 100
Maanta waxaan ku noolahay muuqaal xiiso leh, oo ah barnaamijka bilaashka ah iyo iskaashiga gaarka ah ee gacan ka geysta warshadaha ku jira xaaladaha sii kordhaya ee tartiib tartiib tartiib tartiib ah. Waxaa laga yaabaa in arrintani waa mid ka mid ah dhinacyada mashaariicda furfuran ay yihiin kuwo xooggan sida xalalka liisan la'aanta ah; si kastaba ha ahaatee, ...
Featured, Geospatial - GIS, aragti ugu horeysay
Macluumaadka laga keeno OpenStreetMap ilaa QGIS
Inta ay xogta ku jirta OpenStreetMap waa run ahaantii ballaaran, oo inkasta oo aan si buuxda u updated, kiisaska intooda badan waa sax ahayn xogta dhaqan kiciyey by miisaanka cartographical baxo 1: 50,000. In QGIS waa load weyn daaha this sida map background image sida Google ee ...
JOSM - CAD A xogta tafatirka ee OpenStreetMap
OpenStreetMap (OSM) ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah tusaalooyinka weyn ee ku saabsan sida macluumaadka loo bixiyay hab wadashaqeyn ay u dhisi karaan nooc cusub oo ah macluumaadka kartoonka. Sidan oo kale Wikipedia, ayaa bilowday inay noqoto mid muhiim ah oo maanta ah oo loogu talagalay geoportals in la doorbido in lakala dhigo asalka si ay uga welweliso soo cusbooneysiinta macluumaadkaaga ...
Cartografia, aragti ugu horeysay